Hemp Seed Oil သည်အဆစ်နှင့်သွေးလည်ပတ်မှုအတွက်မည်သို့ကူညီနိုင်မည်နည်း - HelpMEHemp
ရိုးရှင်းရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်အတူ Hemp Seed Oil သည်မည်သို့ကူညီနိုင်မည်နည်း
လူအများစုကအဆစ်ဖြစ်သည်ဟုမှားယွင်းစွာယုံကြည်ကြသည် အိုမင်းခြင်း၏ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ သို့သော်၎င်းသည်အမှန်တရားနှင့်ဝေးကွာခြင်းမရှိနိုင်ပါ။ ထို့အပြင်လျှော်မျိုးစေ့သည်အဆစ်၏ဆိုးကျိုးများကိုကာကွယ်နိုင်သည်။
အချို့လူများကရိုးဆက်ရောင်ရမ်းနာကိုရပ်တန့်စေသည်, ဒါပေမယ့်ဒီခံစားမှုကိုခံစားနေရတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုသင်သိရင် နာစေတတ်သော ရောဂါ၊ စိတ်ကူးတစ်ခုရှိကောင်းရှိနိုင်သည် ဘယ်လို ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏ဘဝအရည်အသွေးကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ကူညီအသစ်သောနည်းလမ်းများနေသော်လည်း စားသောကျပှဲ အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ လူအများစုကဒီမတန်တဆစစ်တိုက်ခြင်းအတွက်အော်ဂဲနစ်နှင့်သဘာဝအခြားရွေးချယ်စရာများကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည် နှင့်ထော့နဲ့ရောဂါ။
အကယ်၍ သင်သည်ရိုးဆက်ရောင်ရမ်းနာကုထုံးကိုသုတေသနပြုနေပါကသင်သည်လျှော်သောအစေ့ရေနံအတွက်သင့်အတွက်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ကိုသင်သိလိုပေမည်။ ဒါ CBD ရေနံကနေကွဲပြားခြားနား နှင့် အကျိုးကျေးဇူးများကျယ်ပြန့်, သင့်ရဲ့စောင်ရေတိုးတက်အောင်နှင့်အဆစ်ပျောက်သွားအောင်ပါဝင်သည်။ လျှော်မျိုးစေ့ဆီသည်သင့်ကိုမည်သို့ကူညီနိုင်ကြောင်းကြည့်ပါ ပြန်. သင်၏အသက်တာကိုထိန်းချုပ်။
အဘယ်သို့ငါs Hemp Seed Oil?
CBD နှင့်လျှော်ရေနံပတ် ၀ န်းကျင်ဖောင်းပွခြင်းမတိုင်မီကတစ် ဦး ချင်းသည်အကျိုးကျေးဇူးများကိုတောင်မသိဘဲလျှော်မျိုးစေ့များကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လျှော်နှင့်လျှော်ထုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်သည့်သုတေသနများမြင့်တက်လာခြင်း၊ we ဆက်လေ့လာပါ လျှော်အမျိုးအနွယ်၏အံ့ဘွယ်သောအမှုအကြောင်းကို နှင့် လျှော်အမျိုးအနွယ်ကိုဆီ။
Hemp seed oil ကိုလျှော်စေ့မှထုတ်ယူသည်။ လျှော်မျိုးစေ့ဆီကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကတည်းကအသုံးပြုခဲ့သည် အသုံးပြုခံ့ လောင်စာ, အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးသည်။ ငါt ကိုပင်အစောပိုင်း၌အသုံးပြုခဲ့သည် gonorrhea ကုသရန် 20 ရာစု နှင့်ဆေးခြောက်နှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်မှုကြောင့်ပိတ်ပင်ထားမီအမေရိကန်ဆေးခန်းများတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
Hemp အမျိုးအနွယ်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော fatty acids များကိုအကောင်းဆုံးမျှတစေသည်, အရာ သင့်ရဲ့အစားအစာ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် မင်းကိုကာကွယ်ဖို့ ပြင်းထန်သောကျန်းမာရေးအခြေအနေများဆန့်ကျင်။
Hemp အမျိုးအနွယ်ကိုဆီပါရှိသည် oကျိကျိတက်-ဒီဟာငါးဆီထဲမှာလည်းရှိနေတယ်၊ သုတေသနလုပ်ငန်း ရှာတွေ့ထားပါတယ် ထို ငါးကိုဆီ နှလုံးကိုအကျိုးမပေးပါဘူး တောင်မှ ရှိပါတယ် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး. ဤသည်ကို လျှော်ရေနံကအလားအလာ အခြားရွေးချယ်စရာ နှင့်နေသည် တစ်ဝှမ်း လူကြိုက်များသောငါးရေနံထက်အဆများစွာပိုများသည်။
Hemp seed ဆီသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဖွဲ့စည်းမှုရှိသည်, အရာအရေပြားထဲမှာဖက်တီးအက်ဆစ်နှင့်ဆင်တူသည်။ ဤသည်ကထိရောက်သောလိမ်းကုသမှုစေသည်။ ဘေးဖယ်ကနေ ၎င်း၏မရှိမဖြစ်ဖက်တီးအက်ဆစ်လျှော်မျိုးစေ့ဆီသည်မော်လီကျူးများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောဗီတာမင်အီးတွင်လည်းကြွယ်ဝသည် tocotrienols နှင့် tocopherols ။ အခြားစားသုံးဆီများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လျှော်မျိုးစေ့ဆီသည် tocopherols များပြားစွာပါဝင်သည်, အရာဖြစ်ပါသည် အရေးပါသောအ ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာရောဂါ၏ကျယ်ပြန့တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်။ ၎င်းတွင် free radical ပျက်စီးမှုကိုတားဆီးရန် antioxidants များပါရှိသည်။
လျှော်မျိုးစေ့ဆီနှင့် CBD ဆီအကြားကွာခြားချက်
လျှော်မျိုးစေ့ဆီသည် CBD တွင်ကြွယ်ဝသော (cကဗျာ)နာကျင်မှုကိုကုသရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲရန် ဦး ဆောင်သည့်ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်၎င်းသည်ဆေးကုသမှုနယ်ပယ်တွင်ဂိမ်းပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ သငျသညျလျှော်လောကီသားအသစ်ဖြစ်ဆဲဖြစ်လျှင်, သငျသညျလျှော်အမျိုးအနွယ်ကိုဆီ CBD ဆီနှင့်လဲလှယ်နိုင်ပါသည်။ ဒီနှစ်ခုနေစဉ် အလားတူမျိုးရိုးဗီဇဒြပ်ပေါင်းများကိုမျှဝေသည်ဤကွဲပြားခြားနားသောတ္ထုများဖြစ်ကြသည်။
Hemp မျိုးစေ့ကိုအပင်၏အစေ့မှထုတ်ယူရရှိပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းမှသာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤအတောအတွင်း CBD ရေနံဖြစ်ပါတယ် လုပ် လျှော်ပင်၏အပွင့်, အဓိကအားနှင့်အရွက်မှ။ CBD ဆီသည်သယံဇာတပေါကြွယ်ဝသောကြောင့် CBD ပါ ၀ င်သောပမာဏများစွာကိုအာမခံပေးသည့်ထုတ်ယူခြင်းနည်းလမ်းရှိသည်t စက်ရုံထဲမှာ cannabinoid ။ othe တွင်လက်, လျှော်အမျိုးအနွယ်ကိုရေနံတစ် ဦး သာပါရှိသည် သေးငယ်သော ပမာဏ CBD ပေမယ့် အင်္ဂါရပ်များ အပြည့်အဝအရောအနှော terpenes ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်သော၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် cannabinoids ။
CBD ဆီနှင့်လျှော်မျိုးစေ့ဆီများသည်ဆေးခြောက်နှင့်မိသားစုတစ်စုတည်းမှထုတ်လုပ်သော်လည်း နှစ်ခုလုံး do မဟုတ် tetrahydrocannabinol ပါဝင်သည် (THC), ထိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းဥစ္စာ လူတို့အားခံစားမှုစိတ်ကိုခံစားစေသည်။မြင့်မားသော။"
Hemp အမျိုးစားဆီသည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောကော့တေးနှင့်အလွန်ဆင်သည်၊ အရောအနှောပါရှိသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိ CB-1 receptors နှင့်တုံ့ပြန်သော cannabinoids ။ ၎င်းသည်သင်၏ endocannabinoid system အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည် (လိမ်လည်မှုများ)။ သင်၏ ECS သည်အဓိကကျသည် in ထိခိုက်ing အာရုံကြောစနစ်အပြင်အာရုံခံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ နာကျင်မှုကိုခံယူခြင်းနှင့်အရည်ထုတ်လုပ်ခြင်းစသည့်သင်၏ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုများအားလုံး။
Hemp ရေနံသည်ဤ receptors များနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး၎င်းကို activate မှကာကွယ်ပေးသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့နာကျင်မှုသိသိသာသာလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။ Hemp seed oil သည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်လျှော့ချခြင်းတွင်အဓိကကျသည်။ ၎င်းသည်အဆစ်နှင့်ဆက်စပ်သောအဆင်မပြေမှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။ လျှော်မျိုးစေ့ဆီရှိ cannabinoids သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိသဘာဝထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆင်တူသောကြောင့်၎င်းသည်ပိုမိုထိရောက်လာသည်။
အဆစ်တစ်ခုသည်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအဆစ်များရောင်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများလာပြီးသွားနိုင်သည်, နာကျင်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်တောင့်တင်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်, အရာပျော့, အလယ်အလတ်မှပြင်းထန်အထိအထိနိုင်ပါတယ်။ လူအများစုကနာကျင်မှုသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပိုမိုဆိုးရွားလာကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့သည် ဤသည်များစွာသောလူတစ် ဦး ခွဲခွာနိုင်ခြင်းစေသည်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများတွင် icipate သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းသောလုပ်ပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များ က c ကဲ့သို့သောခြေလက်ingလှေကား။
အကွောရောငျနာ အမျိုးအစား ၁၀၀ ကျော်နှင့်ဆက်စပ်အခြေအနေများရှိသည် ထို လူမျိုး၊ အသက်အရွယ်မရွေး၊ လိင်အားလုံးမှလူများကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ဒါ အချက်အလက် ၎င်းသည် U ၌မသန်စွမ်းမှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်.S., ထိခိုက်300,000 ကျော်ကလေးများ ing နှင့် 54 သန်း အရွယ်ရောက်သူ။ Osteoarthritis၎င်း၏အသုံးအများဆုံးပုံစံဖြစ်သော \_ t ပုံမှန်အားဖြင့်ရောင်ရမ်းဆေးများမှတဆင့်စီမံခန့်ခွဲသည်, ဘယ်ရှိသည် လေးနက်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုး နှင့်သည်းခံစိတ်ဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ လေးနက်သောကိစ္စများတွင်တ ဦး တည်းခံယူဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည် ပူးတွဲအစားထိုး။
အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရသည် နှင့်ယိုယွင်းသောအရိုး။ ဒီပွတ်တိုက် အတူတူဘယ်အချိန်မှာ သငျသညျရွှေ့သို့မဟုတ် flex။ အာရုံကြောများထိလိုက်သောအခါ၎င်းသည်နာကျင်မှုကိုဖြစ်စေပြီးအရိုးနှင့်အရိုးနုကိုပျက်စီးစေသည်။ ဒီအတွက်ကြောင့်, အကွောရောငျနာ လွတ်မြောက်ရန်ခက်ခဲသောသံသရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
သင်အဆစ်နာခံစားနေရသူသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုသိလျှင်သတင်းကောင်းသည်သင့်ကိုစောင့်ကြိုနေသည်။ အထူးသဖြင့်နာကျင်မှုကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်လျှော်မျိုးစေ့ဆီသည်အကျိုးရှိသောနည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ Hemp အမျိုးအနွယ်ကိုဆီဘူး အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်း၏နာကျင်မှုသက်သာ။ ဒါတင်မက ဒါပေမဲ့ ၎င်းသည်ပျံ့နှံ့သောဆဲလ်များ၏ရှင်သန်မှုနှုန်းကိုလျှော့ချရာတွင်လည်းအထောက်အကူပြုသည်။ အချို့ဆေးများ နိုင်လည်း ဤအန္တရာယ်ရှိသောဆဲလ်များသေစေနိုင်သည်။
Hemp Oil သည်သင်လိုအပ်သည့်နေရာတွင်ချောမွေ့စေသည်
သင့်ကားအင်ဂျင်ကိုစဉ်းစားပါ။ ရေနံမရှိရင်ကောင်းကောင်းလည်ပတ်မှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လား။ သင်၏အရိုးများနှင့်လည်းအလားတူပင်ဖြစ်သည်။ သင်သည်လျှော်မျိုးစေ့ဆီကိုယူသောအခါ၎င်းသည်အလွန်လိုအပ်သည်သင့် system အတွက်ချောဆီအရည်ကြည်နှင့်၎င်း၏ကြောင့်ဖြစ်သည် balancedုံမျှမျှတတပရိုဖိုင်းကိုနှင့်ဆamma-lနေc acid အကြောင်းအရာ, it သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏ကုသနိုင်စွမ်းကိုတိုးတက်စေနိုင်သည် လည်းပဲ သင်၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပါ။
လျှော်၌တည်ရှိသော EFAs အမျိုးအနွယ်ကိုရေနံ ထို့အပြင်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါလုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်၊ စိတ်အခြေအနေ၊ တက်ကြွမှုနှင့်ဆဲလ်ကြီးထွားမှုကိုအထောက်အကူပြုသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ The ပမာဏ အဆိုပါလျှော်အမျိုးအနွယ်ကိုဆီ၌ပစ္စုပ္ပန် CBD ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုတားဆီးခြင်းဖြင့်ရောင်ရမ်းခြင်းလျော့နည်းစေသည် cytokine၎င်းသည်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ တောင့်တင်းခြင်းနှင့်နာကျင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
Hemp Seed Oil သည်သင်၏ဖြန့်ဝေမှုအတွက်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်စေသည်
ရိုးဆက်ရောင်ရမ်းနာနှင့်အတူကူညီခြင်းအပြင်, လျှော်မျိုးစေ့ဆီကိုလည်းသွေးလည်ပတ်မှုနှင့်အတူကူညီပေးသောကြောင့်လူသိများသည်။ ဤအဆီသည်သွေးကိုကျစေသည်, သောကျန်းမာသောသွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ကအားပေးအားမြှောက်။ ဘယ်အချိန်မှာသင့်ရဲ့ circulatiowell ကောင်းကောင်းလည်ပတ်နေတယ်၊ သင်၏သွေးပေါင်ချိန်ကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်နှလုံးပြissuesနာများနှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများကိုလျော့နည်းစေသည်။
ဘယ်တော့လဲ အ သင့် ဦး ရေပြားတွင်သွေးလည်ပတ်မှုတိုးတက်လာသည် မြှင့်တင်ရန် သင်၏ဆံပင်ပုံသဏ္,ာန်နှင့်သင်၏ဆံပင်အစိုဓာတ်ကိုပေး။ ထို့ကြောင့်သင် နှုတ်ဆက်လို့ရပါတယ် ဆံပင်ကျိုးခြင်း
Hemp Seed Oil အတွက်အခြားအသုံးပြုမှုများ
ရိုးဆက်ရောင်ရမ်းမှုကိုသက်သာစေခြင်းနှင့်သင့်သွေးလည်ပတ်မှုတိုးတက်စေခြင်းမှအပများစွာရှိသည် အပိုဆောင်း သင်သည်လျှော်မျိုးစေ့ဆီအသုံးပြုခြင်းမှရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများ။
ပထမ ဦး စွာသင်ပိုမိုကျန်းမာသောဟော်မုန်းများကိုခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည် အိုင်စီတီ သိရှိရသည်အကြောင်းအရာ။ ၎င်းသည် prostaglandins များအတွက်အဓိကကျသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်, ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်နှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အတူကူညီပေးသည်။ သင်သည်လျှော်မျိုးစေ့ဆီဖြည့်သည်နှင့်သင်၏ GLA တိုးပွားလာလိမ့်မည်,သင်၏အရေပြားဓာတ်မတည့်မှု၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ နှလုံးရောဂါနှင့်အဝလွန်ခြင်းတို့ကိုပင်ကူညီပေးနိုင်သည်။
သင်ခံစားနေရလျှင် အစာခခြွေငျး ပြhemနာများ, သင်သည်သင်၏လျှော်အမျိုးအနွယ်ကိုဆီအဘို့အရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဖြေတစ်ခုလိုချင်သူများအတွက်လျှော်စေ့သည်အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းမှပစ္စည်းများကိုချောချောမွေ့မွေ့ကောင်းမွန်စေသည့်ကြွယ်ဝသောအမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှုကြောင့်အဖြေဖြစ်သည်။
၏နောက်ထပ်အလားအလာအကျိုးကျေးဇူး လျှော်အမျိုးအနွယ်သည်ဆီဖြစ်သည် ခွန်အားတားဆီး ကင်ဆာ။ သင်အများကြီးစဉ်းစားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ, သို့သော်ဤရောဂါသည်သင်ကုသမှုခံယူရမည့်ဖြစ်စေ၊ သင်နှင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေသို့မဟုတ်ဆွေမျိုးတစ် ဦး ဖြစ်စေတစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းထိခိုက်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Ly, လျှော်အမျိုးအနွယ်ကိုရေနံမျှော်လင့်ချက်ပေးသည်။
ထို့အပြင်လျှော်မျိုးစေ့ဆီသည်အကျိုးရှိသည် အသားအရေကထူးချွန်သောသဘာဝ moisturizer အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်ကတည်းက။ အခြားအဆီများနှင့်မတူဘဲလျှော်စေ့ဆီသည်အဆီနှင့်လေးလံသည်ဟုမခံစားရပါ။ ၎င်းသည်အသားအရေကိုလျင်မြန်စွာစုပ်ယူနိုင်ပြီးချက်ချင်းနူးညံ့မှုကိုခံစားစေနိုင်သည်။ ရေချိုးခြင်းဖြင့်သင်၏အရေပြား၊ ဆံပင်နှင့်လက်သည်းများကိုအနှိပ်ခံနိုင်သည်။
သင်အစားအစာသို့မဟုတ်ပြင်ပမှအသုံးပြုခြင်းကိုပိုနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေလျှော်မျိုးစေ့ဆီအသုံးပြုခြင်းသည်နှင်းခူနှင့်ဝက်ခြံတိုက်ဖျက်ရန်အတွက်ကောင်းမွန်သောနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်,သော EFA မညီမျှမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နေကြသည်။ ဒါတင်မက ဒါပေမဲ့ အသားအရေပြင်ပရှိအဆီဖွဲ့စည်းမှုကိုတိုးတက်စေခြင်းဖြင့်အိုမင်းခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလည်းတားဆီးပေးသည်။ ဒါ အကျိုး နုပျိုလတ်ဆတ်သောကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်မည်။
Hemp Seed အသုံးပြုနည်း ဆီ
Hemp ရေနံသည်ဆေးကုသမှုခံယူခြင်းအတွက်သဘာဝ၊ ၎င်းသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနည်းပါးသောကြောင့်၎င်းကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ မင်းခံစားခဲ့ရရင် အကွောရောငျနာ နာကျင်မှုလာ ကအကြံပြုသည် လျှောက်ထားရမည် ၏စတင်ခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ထိခိုက်နစ်နာဒေသများမှအဓိကအား မည်သည့် အဆင်မပြေ။
ထို့အပြင်သင်၏နေ့စဉ်အစားအစာများတွင်လည်းသင်ပါဝင်နိုင်သည်။ Hemp အမျိုးအနွယ်သည်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောအာဟာရအရသာရှိသည်, အရာကအံ့သြဖွယ်စေသည် ထို့အပြင်သို့မဟုတ်အခြေစိုက်စခန်း dips နှင့်တစ်သင်းလုံးကကစားသမားသည်s။ သငျသညျသံလွင်ဆီအစားသင်၏ပီဇာထိပ်ဆုံးလိမ့်မည်သို့မဟုတ်၎င်းကိုသင်၏အကြိုက်ဆုံးအချိုပွဲများတွင်ထည့်ပါ. လျှော် ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ဆန်၊ ကွီနိုနှင့်အသားများအရသာကိုပါဖြည့်ပေးနိုင်သည်။
တစ် ဦး က။နှုတ်ဖြင့်စားသုံးလျှက်လျှော်မျိုးစေ့ဆီ၏ aily ဆေးပြားနှင့်အတူကြွလာအကျိုးကျေးဇူးများ။ If သင်ကထည့်သွင်းချင်ကြဘူး သင်သည်သင်၏အစားအစာအတွက်ဖြစ်နိုင်သည် ရိုးရိုး လျှာအောက်ကိုအနည်းငယ်ဖြန်း။ ၊ ဒါ နည်းလမ်း သင်၏သွေးစီးဆင်းမှုကိုလျင်မြန်စွာခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ အခုဆိုရင်သင့်ရဲ့အသားအရေနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ဖြည့်စွက်ဆေးများအပြင်ချက်ပြုတ်သည့်ရေနံသည်အတူတူပုလင်းထဲတွင်ရှိသည်။ သို့သော်မီးခိုးငွေ့နိမ့်သောကြောင့်၎င်းကိုချက်ပြုတ်ရာတွင်သတိထားပါ။
Hemp Seed Oil သည်သင့်ကိုကူညီပါလိမ့်မည်
လျှော်မျိုးစေ့ဆီသည်အသုံးမပြုနိုင်သောဆေးဝါးနှင့်မတူနိုင်သည့်အခြားနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် တောင်မှဖြင့် သက်သတ်လွတ်များနှင့်သက်သတ်လွတ်။ Hel မှာp Me Hemp, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လျှော်အမျိုးအနွယ်ကိုဆီ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှစ၍ စနစ်တကျမွေးမြူခဲ့သည်။ ဤအတွေ့အကြုံနှင့်အတူသင့်ဘဝ၏အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေနိုင်သည့်ထိပ်တန်းသဘာဝဆေးတစ်လက်လည်းရှိသည်။ ရိုးဆက်ရောင်ရမ်းနာကိုဖယ်ရှားပြီးသင်၏လည်ပတ်မှုကိုတိုးတက်စေသည့်အခါမခံနိုင်သောနာကျင်မှုကိုစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲသင်ချစ်မြတ်နိုးသည့်အရာကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက်အချိန်ပိုကုန်ဆုံးနိုင်သည် အစဉ်အဆက်ကိုထပ်။